"Iifoto ezabiwe kwi-iCloud" zenziwe zasebenza kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra | Ndisuka mac
Ukusetyenziswa kweefoto esinazo ngokwendalo kwi-MacOS High Sierra kubandakanya izinto ezininzi ezintsha kunye nezinye izinto ezimangazayo. Isicelo sinemisebenzi engaphezulu, okanye ezi zifunyanwa ekuqaleni, xa kuguqulelo lweMacOS Sierra, kuye kwafuneka ujonge ukuhlela iiparameter ezithile. Inkangeleko kunye nokuziva kukhumbuza iinkqubo ezithile zokuhlela iifoto zeMac, njengeFotoScape X eyaziwayo. Kongezwe kakhulu, nayo ngokunjalo isebenze umsebenzi weefoto ekwabelwana ngazo kwi-iCloud ngokungagqibekanga, ubuncinci ukuba ufaka ukusuka ekuqaleni.
Lo msebenzi ugcina zonke ii-albhamu esabelana ngazo nabahlobo kunye nosapho kwi-Mac yethu. Ngumsebenzi onomdla kakhulu kwaye ukhululekile ukuwusebenzisa, kodwa uthatha indawo eninzi. Kwimeko yam, malunga ne-albhamu ezingama-50, kwi-Mac yam, bahlala kancinane ngaphezulu kwe-7 GB.Ndisebenzisa lo msebenzi kwi-iPhone, njengoko zigcinwa kwilifu le-Apple, kodwa ndiyikhubazekile kwi-Mac. Xa ufaka iMacOS ePhakamileyo yeSierra, Ukwabelana ngeefoto ze-ICloud kwenziwa ngokungagqibekanga.
Ukujonga ukuba lo msebenzi uyasebenza na:
Kuya kufuneka ungene Iifoto, ukufikelela ukhetho ukusuka kwibar yomsebenzi ongasentla.
Okulandelayo, uya kubona uphawu lwe-iCloud, ngokunqakraza kuyo siza kubona ukuba ibonakala njani ukhetho lokugqibela Iifoto ezabiwe kwi-iCloud.
Ukuba unokukhetha ukukhangela, unokwenza izinto ezimbini. Into yokuqala, yazi ukuba yeyiphi indawo iifoto ekwabelwana ngazo ezihlala kuzo. Yayo:
Kuya kufuneka ujonge ifolda ekule ndlela: ~ / Ithala leencwadi / Izikhongozeli / com.apple.cloudphotosd.
Sukuba nexhala, kufuneka uye kwi-Finder nakwi-taskbar cinezela Ir ke ngoku Yiya kwifolda ... kwaye ukope kwaye uncamathisele umendo oboniswe apha ngasentla.
Khetha ifolda Cloudphotosd kwaye cinezela Cmd + mna ukufikelela kulwazi lwencwadi eneenkcukacha.
Uphawu lwesibini olubonakalayo bubungakanani. Ngokusekwe kuyo, vavanya ukuba uyafuna ukugcina umsebenzi we iifoto ezabiwe kwi-iCloud. Ukuba ufuna ukwenza lo msebenzi, cinezela nje ukuze usebenze. IMacOS iya kucima umxholo weCloudphotosd, kodwa gcinani engqondweni ukuba anizukukwazi ukwahlula ii-albhamu kwi-Mac yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » "Iifoto ezabiwe kwi-iCloud" zenziwe zasebenza kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra
Sakaza iividiyo zakho kunye nomculo ukusuka kwi-Mac ukuya kwiChromecast kunye nesi sicelo